Budada Raw Pramiracetam (68497-62-1) Soo-saareyaasha - Phcoker
Budada Pramiracetam waa nooc ka mid ah cunsuriyada synthetic ee loogu talagalay ujeedada kor u qaadista garashada…
Capacity: 1018 kg / bishii
Budada Raw Pramiracetam (68497-62-1) video
Budada Raw Pramiracetam (68497-62-1) Sharaxaad
Budada Pramiracetam (oo sidoo kale loo yaqaan Pramistar) waa kobcinta fahamka (nootropic) kaas oo laga soo saaro budhcad-badeedka, asalka jilicsan, oo beddelaya kooxda amide ee budhcad-badeeda iyadoo leh koox dipropan-2-ylamino etyl. Beddelkan ayaa u oggolaanaya budada Raw Pramiracetam inay ka xoog badnaato piracetam.
Nidaamyada budada Raw Pramiracetam lama yaqaan, laakiin waxay u muuqataa in ay wax ka bedesho dhaqdhaqaaqa EEG ee dhammaan jiirka lagu tijaabiyey (da 'yar iyo waayeel) waxaana laga yaabaa inay kobciso kor u qaadida qulqulka sare. Waxay la mid tahay burcad-badeedda iyo cunsuriyada kale ee dareenka ah in qaababka ay u muuqato inay ku tiirsan yihiin qanjidhada adrenal iyo saameynaha kale ee aan caadiga ahayn, laakiin ka baxsan in farsamooyinka aan la sii xoojin.
Budada Raw Pramiracetam (68497-62-1) Smamnuucista
Product Name Biyaha budada ah ee Pramiracetam
Magaca Kiimikada Amacetam, Root Pramiracetam budada
Fasalka Daroogada Wakiilka anti-xanuujinta
Molecular Wsideed 269.38 g / mol
barafku Psaliid 47-48 ° C
karisaaning Psaliid bp0.15 162-164 ° C
Biological Life-Life Ku saabsan saacadaha 5
Color Cabbirrada cad
SOlubility H2O: Soluble10mg / mL, cad
Application Kordhinta xasuusta oo sii wanaajiyaan kartida barashada
qaydhiin Pramiracetam budada (68497-62-1) Tafaasiisha
Budada Pramiracetam waa habdhiska habdhiska dhexe ee dareenka iyo wakiilka nootropic ee ka tirsan qoyska cunsuriyada ah ee daroogada. Pramiracetam waa mid ka mid ah maskaxda korriinka ugu weyn ee nootropics ee la heli karo, waa 5 wakhtiyo 30 ka xoog badan qaraabada. Waxay hagaajinaysaa diiradda, diirada, iyo xasuusta. Marka la barbardhigo qaar ka mid ah sawirada kale, pramiracetam ayaa lagu tijaabiyay dadka waaweyn ee caafimaadka qaba halkii ay ku mashquulin lahaayeen waayeelka kuwaas oo horay u lumiyay awoodooda garashada. Gaar ahaan, pramiracetam waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta xusuusta waqtiga dheer ee tijaabooyinkaas.
Nootropic sidoo kale waxay u dhaqmaan sida wakiilka neuroprotective iyo ka hortagi kartaa luminta xasuusta iyo hoos u dhaca garashada guud.
Pramiracetam budada (68497-62-1) Mashruuca Waxqabadka
Sida jilayaasha ugu badan, iyo runtii ugu weyn ee nootropics, pramiracetam waxay saamaysaa sii deynta kiimikada maskaxda, oo loo yaqaan 'neurotransmitters', kaas oo u oggolaanaya gudbinta calaamadaha u dhexeeya unugyada dareemayaasha. Hase yeeshee, pramiracetam waxbaa wax yar ka duwan. Ma si toos ah u kicineyso goobo gaar ah oo loo yaqaan 'neurotransmitter reseptor', taas oo saameyn ku yeelan karta kobcinta wax soo saarka iyo sii deynta nuuca loo yaqaan 'neurotransmitter'.
Pramiracetam waxay caawisaa feker cad. Pramiracetam wuxuu u shaqeeyaa iyada oo la kordhiyo qulqulka sare ee Choline ee hippocampus. Sida nasiibku u yeelan lahaa, Choline wuxuu u dhacaa inuu noqdo nuxotransmitter oo loo yaqaan 'Acetylcholine', oo ah furaha muhiimka ah ee hababka fahamka sida xoojinta, xoojinta barashada iyo xasuusta. Sidaa darteed, maxay tahay in pramiracetam uu si toos ah u habeynayo goobaha loo yaqaan 'Acetylcholine', taas oo kicinaysa waxqabadka kordhay hippocampus. Hawlahan dheeraadka ahi waxay hagaajinaysaa sameynta xusuusta cusub iyo tixraaca dadka waaweyn.
Codsiyada of Pramiracetam budada (68497-62-1)
Budada Pramiracetam waxaa soo saaray Parke-Davis oo dib ugu soo laabatay 1970s waxaana loo sharciyeeyay Mareykanka 1979. In kasta oo tan iyo markii si balaaran loo bartay daaweyn ahaan arrimaha xasuusta ee la xiriira dhaawacyada maskaxda iyo cudurada sida Alzheimers, waqtigaan FDA ma sameyso u ansixi adeegsi kasta oo gaar ah.
Taasi waxay tidhi, pramiracetam waxa uu ku guuleystay Yurub. Noocyada hoose ee lagu magacaabo Neupramir, Pramistar, iyo Remen, waxaa badanaa loo qoraa daaweynta xaaladaha neerfaha sida xanuunka, dementia, iyo ADHD.
talinayo Pramiracetam budada (68497-62-1) Qiyaasta
Qiyaasta ugu wanaagsan ee qofku u kala duwan yahay, ayaa lagu taliyaa qiyaasta pramiracetam waa 600mg-1200mg, waxay kugula talin doontaa inaad u qeybiso wadarta wadarta maalinlaha ah laba ama seddex qiyaasood, sababtoo ah pramiracetam waxay leedahay 5 ilaa 6 nus saac. Marka aad si siman u kala qaybsatid qiyaasta maadada maalinta, ayaa si ka badan u joogta heerka nootropic waxay ku jiri doontaa nidaamkaaga, iyo natiijada guud ee fiican.
Daraasadaha bani-aadamka ee hadda jira waxay isticmaaleen wadarta maalinlaha ah ee 1200 mg of pramiracetam, waxaa la ogaaday in ay tahay mid waxtar leh oo si fiican loo dulqaadan karo waxaana laga yaabaa in ay noqoto meel fiican oo tixraac ah oo lagu go'aamiyo baahida qiyaasta shakhsi ahaaneed. Laakiin marwalba waa mid caqli-gal ah in la bilaabo qiyaasta ugu hooseysa ee suurtagalka ah iyo in la dheereeyo qiyaasta inta loo baahdo
Faa'iidooyinka of Pramiracetam budada (68497-62-1)